कतै तपाईंको मोबाइलमा जासुसी गर्ने (स्पाईवेयर) त छैन ! कसरी थाहा पाउने ? | ictkhabar
Sep Fri 2021 02:04:08
ह्याकिङको खतरा पनि त्यही स्तरमा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । प्रयोगकर्ताको डिभाइसमा कति बेला स्पाइवेयर वा माल्वेयर इन्स्टल भइदिन्छ, पत्तै हुँदैन । यहाँनिर जान्नै पर्ने कुरा के छ भने स्पाईवेयर पनि माल्वेयरकै एउटा प्रकार हो । जसले प्रयोगकर्ताको डिभाइसमा रहेका महत्वपूर्ण सूचना ह्याकरसम्म पुर्‍याउने गर्दछ ।
स्पाईवेयरबाट जोगिन चाहनुहुन्छ भने सकेसम्म सक्कली र आधिकारिक एप तथा सफ्टवेयर मात्र प्रयोग गर्नुहोस् । यसको अर्थ गुगल प्ले स्टोर, एप्पल एप स्टोर जस्ता आधिकारिक एप स्टोरबाट मात्र एप डाउनलोड गर्नुहोस् । सुपर एन्टी स्पाईवेयर, स्पाइवेयर ब्लास्ट जस्ता सफ्टवेयर तथा एप समेत स्पाइवेयर डिटेक्ट गर्नका लागि उपयोगी हुन सक्छन् ।
- टेकपाना बाट साभार